uniblue Driver scanner 2012 version 4.0.7.1 (နောက်ဆုံးထွက် ဗားရှင်း) ~ Nyi Nay Min (Reshare IT knowledge)
uniblue Driver scanner 2012 version 4.0.7.1 (နောက်ဆုံးထွက် ဗားရှင်း)
ဒီတစ်ခါ Driver အခက်အခဲ ဖြစ်နေသူများအတွက် တစ်ခြား driver ရှာတဲ့ program တွေထက် ကောင်းတဲ့ driver scanner ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်. နောက်ဆုံးထွက် version ပါ. ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် ခုနကပဲ စမ်းပြီးတော့ Download လုပ်လို့ မရတဲ့ window7အတွက် driver ကို install လုပ်လိုက်တာ အဆင်ပြေသွားပါတယ်. Dell နဲ့ fujitsu အတွက်ပါ. အားလုံးအတွက် အဆင်ပြေပါစေလို့ မျှော်လင့်ပါတယ်. ထည့်ရမယ့် serial number တွေကို အများကြီး တင်ပေးထားပါတယ်. တစ်ခုနဲ့ အဆင်မပြေ ရင် နောက် တစ်ခုနဲ့ ထည့်ပါ. ပြောစရာတစ်ခုကတော့ သူ့ကို active ဖြစ်ဖို့အတွက် internet တော့ လိုအပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်. internet မချိတ်ပဲနဲ့တော့ active မဖြစ်ပါဘူး. ကဲလိုချင်ရင် အောက်မှာ download လုပ်လိုက်ပါ.
ပထမဦးစွာ active ဖြစ်ဖို့ key ထည့်ပါ
Driver ကို Scan လုပ်ပါ။ လိုအပ်သည့် driver များတွေ့လျှင် Download All ကို နှိပ်ပြီး Download လုပ်ပါ။
Download လုပ်ပြီးလျှင် လုပ်ပြီးသည့် link ရဲ့ အလယ်တည့်တည့်မှာ install ဆိုတာ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်. install ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် လိုအပ်တဲ့ driver တွေ အလိုအလျှောက် ရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်. ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်ရံမှာ install လုပ်ပြီးရင် restart ချခိုင်းတတ်ပါတယ်. restart ချပေးလိုက်ပါ. အစကနေ ပြန်ပြီး download လုပ်စရာမလိုပါဘူး. Driver scanner program ပြန်ပေါ်လာတာနဲ့ ခုနက Download လုပ်နေတဲ့ နေရာကနေ ကျန်တဲ့ Driver တွေကို ဆက်ရှာနေပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတဲ့ driver တွေကိုသာ install လုပ်နေလိုက်ပါ။ Minus | Mediafire | Ifile
shwezabudeikMay 31, 2012 at 5:15 PMKEY များ တခုမှ မရပါ ခင်ညဟူး.....မောလိုက်တာ....ကီးတွေ ထည့်ရတာReplyDeleteKelvin KelvinJune 11, 2012 at 10:35 PMCarefully and patient, Key within FAQ2S-KCVE7-3JWEA-YNUK5-X57S9-D25YZ DS-KZNZF-6Y3GV-W2ZSB-RSTV8-LA2­RH-VPTG6DS-FGDVT-FUQNK-AMEFW-2U9ZL-N76S5-TNYLVDS-KZNZF-6Y3GV-W2ZSB-RSTV8-LA2RH-VPTG6are OK try it. Anonymous HelperReplyDeleteshin shinMay 1, 2013 at 8:52 AMDS-LVQTJ-EJAG8-GX7MC-NYER4-5A34Y-5NNSWThis serial key works today (30/04/2013)Thank you so much Ko Nay Min. I do appreciate it.ReplyDeleteAdd commentLoad more...
စာအုပ်အမည် = Window 8 ကိုလေ့လာခြင်း ရေးသားသူ = သရ ဒါကတော့ window 8 အသုံးပြုနည်း စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ window 8 သုံးနေသူများ လေ့လာလို့ရ...
နေ့စဉ် Kaspersky keys များ (14 May 2013)
Kaspersky တွေကို ခဏခဏ မေးတတ်ကြလွန်းလို့ မထူးဘူးဆိုပြီးတော့ အမြဲတမ်း update လုပ်ပေးမယ်။ ပြီးတော့ အားလုံးမြင်အောင် ထိပ်ဆုံးမှာ ထားလိုက်ပါ့...
Window 8 Professional 64bit (အခုကျနော် သုံးနေတဲ့ Window 8 64bit ကို တင်ပေးလိုက်တာပါ)
အားလုံး အဆင်ပြေကြရအောင် Free လည်းဖြစ် Download လုပ်ရတာ လည်းအဆင်ပြေအောင်လို့ ရွေးပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အားလုံးအဆင်ပြေ လိမ့်မယ်လို့ မျှော...
မိမိသုံးခဲ့တဲ့ password, product key and serial ke...
Photoshop cs5 အသုံးပြုနည်း (မြန်မာလို)
Java programming အကြောင်း လေ့လာနေတဲ့သူများအတွက် Te...
Virus များအကြောင်း (မြန်မာလို)
လွယ်ကူတဲ့ Power director video editing စာအုပ် (မြန...
ကိုဝင်းဟိန်းရေးသားသော Android application ဆိုင်ရာ ...
ဦးဇော်လင်း ရေးသားထားတဲ့ Computer Lessons For High...
Adobe Premiere Pro CS5 အသုံးပြုနည်း (မြန်မာလို)
Wifi Hacking Basic (မြန်မာလို)
ကိုမျိုးသူရရေးတဲ့ Easy Computer Basic စာအုပ် (မြန်...
uniblue Driver scanner 2012 version 4.0.7.1 (နောက်...
Internet Download manager 6.11 built7(နောက်ဆုံးထ...
Toshiba Dynabook CX1 driver for window xp
ရွှေရင်ကျော်ဣစ္ဆာသယမဟိဒ္ဓိစေ website စတင်ရေးသားခြင်း